အင်းစိန်ထောင် – Na Pann San
Na Pann San W | April 1, 2020
မွေးနီ ၊ နက်ကျော် နဲ့ ဝင်းမြင့် တို့ အုတ်ရိုးပေါ် မှာ ရှိသလား…. “ နောက်ဆုံး ကရင်မ ယောက်ျား ကိုဝင်းမြင့် ဘာဖြစ်သွား သလဲ….” စမ်းချောင်းသား ရဲ့ စကားကို လူလိမ် ဝိဇ္ဇာကျော်မြင့် ချက်ချင်းပြန်မဖြေနိုင် ပါဘူး။ သူ့မျက်နှာက ဝမ်းနည်းမှုတွေ၊ ကြေကွဲမှု တွေနဲ့ အသားတွေ
” ဆရာ စံဇာဏီဘို ၊ ကရင်မနှင့် တစ်ချက် တစ်ကောင် ချစ်လေးမောင် ” မနှင်းဆီ ( ခ ) ကရင်မ ဟာ သူ့ယောက်ျား ကိုဝင်းမြင့် လွတ် သွားပြီး နောက်ပိုင်း အဆောင် မှာ လူ များ လို့ လား မသိဘူး…။ နှစ်တွေကြာလာတော့
Na Pann San W | March 31, 2020
ရု ပ်ရှင် မင်းသားကြီး ဦးအောင်လွင် ကို မနှင်းဆီပြော တဲ့ “ တ ပီ လာ အယ်ဒေါအော်အီ;…”နောက် ဆုံး တော့ အကျဉ်းသားတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ပရလောက သားတွေ ထဲ မှာ ကြေကွဲစရာ အကောင်းဆုံး သူကတော့ “ ကရင်မ” လို့
Na Pann San W | March 30, 2020
( ကွယ်လွန်သူ အလှ အတွက် အပတ်စဉ် ပို့နေတဲ့ ဟင်းတစ်ခွက် ) “ ဒါ ဆို အင်းစိန်ထောင်ထဲ မှာ မနှင်းဆီ က အခု ချိန်ထိ ရှိနေတာပေါ့ ….“ ဒီစကား ကို အံ့သြတကြီး ပြောလိုက် သူကတော့ အတိတ်ကနေ လန့်နိုးလာတဲ့ စမ်းချောင်းသား ဖြစ်ပါတယ်….။
Na Pann San W | March 29, 2020
တို့ ချစ်ခြင်း ကို ကွင်းအောင် တစ်စေ ၊ မီးလို မွှေတဲ့ နရသိန် အင်းစိန်ထောင်ထဲ ကို မြို့နယ် အသီးသီးက တရားရုံးတွေ မှာ အမှုရင်ဆိုင်ဖို့သွားတဲ့ အချုပ်သားတွေ တဖွဲဖွဲပြန် ဝင်လာ ကြပြီဖြစ် ပါတယ် ။ ၁ ဆောင်က အချုပ်သားတွေဟာ မိန်းဂျေးလ်မှာ သတင်းပို့ပြီး အဆောင်ထဲကို
Na Pann San W | March 28, 2020
၀င် ပူး ထွက် ပူး ဦး ချင်း နှင့် ဆရာ “ ငိုသံကြား ” နောက် တစ်နေ့ အိပ်ဆောင် ဖွင့်တော့ အခန်းလူကြီး ကျော်မြင့် မျက်လုံး ပြူးသွား တယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူ့အခန်း အပေါက်တိုင်း က သံတိုင်တွေ ပေါ်မှာ ကွမ်းယာတွေ
Na Pann San W | March 27, 2020
မနှင်းဆီ အတွက် အမျှမဝေပါနဲ့.. အစ်ကို…. မနှင်းဆီ ရဲ့ ထိတ်လန့်ကြေကွဲ စရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက် ကို ကြားပြီးတဲ့ နောက် ခင်ပွန်းဖြစ် တဲ့ ကိုဝင်းမြင့် လည်း ရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတယ် ။ အ ဆောင် တစ်ဆောင်လုံးက အကျဉ်းသားတွေ ကလည်း ကိုဝင်းမြင့် ကို သနားနေ ကြတယ် ။
Na Pann San W | March 26, 2020
” ထောင်ဗူးဝ လမ်းမပေါ် မှာ ကျိန်စာသင့်ခဲ့ လေသော မနှင်းဆီ ” အိမ် မှာ မနှင်းဆီလဲကျ ကျန်ရစ်ခဲ့ပေမယ့် ကိုဝင်းမြင့်ကတော့ လောလော ဆယ် ရဲတွေ ရဲ့ဖမ်းဆီးေ ခ်ါဆောင် သွားခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ ကိုဝင်းမြင့်က အိမ်ဖော်မစန်းကို မုဒိမ်းမှုကျူး လွန်တယ်၊ မကျူးလွန်ဘူးဆိုတာ ကို အဲဒီခေတ်က ဓာတုဗေဒနည်းအရ
Na Pann San W | March 25, 2020
ထောင်ဗူးဝ လမ်းပေါ်မှာ ကျိန်စာသင့် ခဲ့သော မနှင်းဆီ လူလိမ် ဝိဇ္ဇာ ကျော်မြင့် ရဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ကရင်မ ( ခ ) မနှင်းဆီ အပေါ် ထင်မြင်ယူဆချက် အမျိုးမျိုး ပြောဆိုနေမှုတွေ အားလုံး အသံတိတ်သွား ပါတယ်။စမ်းချောင်းသား အပါအဝင် အနားမှာ ရှိနေသူ အားလုံးက ( ၁
Na Pann San W | March 24, 2020
” လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင်လာသော မနှင်းဆီ ( ခ ) ကရင်မ ဒဏ္ဍာရီ ” “ ၃ တိုက် မှာ မိန်းမ တစ်ယောက် မြင်လိုက် ရတယ် ” ၁ ၉ ၈ ၉ ခုနှစ် ၊ ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည် မရောက်ခင် အထက်ပါ